Archdiocese of Mandalay blog: အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း (၂၃)
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း (၂၃)
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း (၂၂)
ရန်ကုန်မြို့ပေါ် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော သာသနာလုပ်ငန်းများ။ (၃၉)
မယ်တော်သခင်မကွန်ဗင်း The Assumption Convent.
ရန်ကုန်မြို့တွင် ဘားရ်နားဘိုက်သာသနာပြုများသည် သက္ကရာဇ် ၁၇၆၈-ခုနှစ်ကပင် သာသနာလုပ်ငန်းများကို စတင်ပြီး အခြေချ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်က ဘုန်းတော်ကြီး ပီအို ဂါလီဇီယားသည် ဘားရ်နားဘိုက်အဖွဲ့ဝင်များတွင် ရန်ကုန်မြို့၏ ပထမကျောင်းထိုင်အဖြစ် တာဝန်ယူထမ်းရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၇၇၂-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး မာချဲလို ကော်တင်းနိုးဗစ်သည် မိုးကောင်းကင်သို့ ပင်ဆောင်ခံရတော်မူသော မယ်တော်သခင်မ ဘွဲ့ခံကျောင်းတော်တွင် တာဝန်ယူ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဤကျောင်းတော်တည်ရှိသော နေရာသည် မြို့ရိုးသဖွယ် ခံတပ်စည်းရိုးဖြင့် ၀ိုင်းရံထားသော မြို့မတည်ရှိရာအရပ်တွင် ရှိခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး မာချဲလိုကော်တင်းနိုးဗစ် လက်ထက်တွင် အဆိုပါ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ ကျောင်းဆောင်သစ်များကို တိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆောင်သစ်များ အားလုံးကို မြန်မာ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကိုသာ အသုံးပြုလျက် မြန်မာနည်း မြန်မာ့ပုံစံများဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းဆောင်သစ်များကို အမျိုးသမီးကလေးများ ပညာသင်ကြားရေးအတွက် ရည်ညွှန်း ဆောက်လုပ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ စာသင်ကျောင်းသည် အမျိုးသမီး ဦးရေ (၁၀၀၀) တစ်ထောင်ခန့် ဆံ့သော ပညာရေးကျောင်းဖြစ်သည်။ ကျောင်းသူကလေးများအား ထိန်းကျောင်း သင်ကြားပေးရန်အတွက် မြန်မာအမျိုးသမီး အချို့ကို အုပ်ထိန်းသူများ အဖြစ် ခန့်ထားသည်။ အဆိုပါ အုပ်ထိန်းသူများသည် အီတလီပြည်၏ ဘားရ်နားဘိုက်အသင်းဂိုဏ်းမှ ထပ်ဆင့် တည်ထောင်ထားသော သီလရှင်ကြီးများ အသင်းဂိုဏ်း၏ ၀ိနည်း စည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ စောင့်ထိန်းနေထိုင် ကြရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး မာချဲလို ကော်တင်းနိုးဗစ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော အမျိုးသမီး ပညာရေးကျောင်းသည် နောင်တွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော ကွန်ဗင်းကျောင်း အားလုံး၏ ရှေ့ပြေး အမျိုးသမီးပညာရေး စာသင်ကျောင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
(၃၉) A New Account of the East Indies, 1727. Vol 2.pg.15.By Alexander.
ii Della Vita di Giovanni Maria Percoto, Undine 1781.ByM.A Griffini.
iii. A Description of the Burmese Empire’ Sangermano
(ခ) စိန်ဂျွန်း အမျိုးသားကျောင်း St. John’s Boys School.
ရန်ကုန်မြို့တွင် အမျိုးသားကလေးများအတွက် စာသင်ကျောင်းကိုလည်း စိန်ဂျွန်းဘတ္တစ္စတားဘုရားကျောင်းတွင် ဘားရ်နားဘိုက်များမှ ဖွင့်လှစ်ထားသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီသည် သက္ကရာဇ် ၁၇၆၇ ခုနှစ် ရန်ကုန်မြို့ စိန်ဂျွန်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် ကျောင်းထိုင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ စိန်ဂျွန်း ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသည် မယ်တော်သခင်မ ဘုရားကျောင်း တည်ရှိရာသည် ရန်ကုန်မြို့မ၏ ပြင်ပရှိ ‘တပ်ကလေး’ ခေါ် ရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိသည်။ တပ်ကလေးသည် မြို့မပြင်ပတွင် ရှိသော်လည်း မြို့မထက် လူဦးရေများပြားပြီး လူမျိုးပေါင်းစုံ နေထိုင်ကြသည်။ ၁၇၈၆-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနိုသည် ကျောင်းထိုင် ဘုန်းတော်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၇၈၇-ခုနှစ်တွင် အထက်မြန်မာပြည် မြောင်မြို့နယ်၊ နဘက်ရွာမှ ကုန်သည်ကြီး. ဦးမြတ်ကျော်၏ ကောင်းမှုဖြင့် ကျောင်းဆောင်များကို ဥရောပတိုက် ပုံစံအတိုင်း အုတ်များအသုံးပြုခါ ဘုန်းတော်ကြီး ကာရ်ပါးနီ ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ကျောင်းဆောင်များကို ပြုပြင် မွမ်းမံတိုးချဲ့ ဆောက်လုပ်ပေး
ခဲ့သည်။ ထိုပြင် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနိုသည် ကျောင်းတွင် သင်ကြားပို့ချပေးနေသော ပညာသင်ရိုးညွှန်းကိုလည်း အဆင့်တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။(၄၀)
စိန်ဂျွန်း အမျိုးသားကျောင်းတွင် သဒ္ဒါကျမ်းစာစီစာကုံး ဒဿနိကဗေဒ၊ ဂဏန်းသင်္ချာ၊ ပထ၀ီ၊ ရေကြောင်းပညာ အတတ်ပညာ အစရှိသော ဘာသာရပ်စုံကို သင်ကြားပေးသည်။ ကျောင်းသည် စည်းကမ်း ကြီးမားသည်။ စန်ဂျယ်ရ်မားနို ကိုယ်တိုင်ပင် ကျောင်းစည်းကမ်း ချိုးဖေါက်သူများအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အပြစ်ဒဏ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ကျောင်းသားများမှာ အချိန်မှန်မှန် စာသင်ကြားရသည်။ စာကျက်ရသည်။ ကာယဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အားကစားနှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းများကို ပြုလုပ် ဆောင်ရွက်ကြရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကျောင်းသားကလေးများ ပညာရေးဘက်တွင် ထူးချွန်ကြပြီး တာဝန် ၀တ္တရားများကို စည်းကမ်း သေ၀ပ်စွာဖြင့် စောင့်ထိန်းကြသည့် ကျောင်းသားကလေးများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ပြင်ပလောကမှ လက်ခံထားကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ စည်းကမ်း ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှု မြင့်မားပြီး ပညာရေးဘက်တွင် ထူးချွန် တတ်မြောက်သည့် ကျောင်းသားကလေးများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းဆင်းများကို လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကို မိမိတို့ လုပ်ငန်းခွင်များ၌ အသုံးချရန် အထူး လိုလား တောင့်တခဲ့ကြသည်။ ၁၇၆၀-ခုနှစ်များမှ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းကြီးသို့ ပင်လယ်ကူးသင်္ဘောကြီးများအား ရေကြောင်းပြမူးများ အဖြစ် အမှုထမ်းဆောင်ရွက်ကြသော ရေတပ်မှုးများမှာ ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနို၏ တပည့်သားရင်း ကျောင်းဆင်းများပင် အများစု ဖြစ်ကြသည်။
(၄၀) ‘ It (the school of Father Sangermano) contained fifty students who were instructed in several branches of learning and science, so that besides ecclesiastics it has produced skilful engineers, physicians and even pilots. “
Cf.Beginnings of Christian Missionary Education in Burma. “U Kaung. J B R S. 50th Anniversary 1960.pg.129
(ဂ) စိန်ဂျွန်း တွဲဘက် ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်း St. John’s Minar Seminary.
မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကက်သလိခ် ရဟန်းဘောင်သို့ တက်လှမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ပထမဆုံး ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းမှာ ၁၇၇၁-ခုနှစ်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ခင်ဦးမြို့နယ် မုံလှရွာတွင် ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောကျောင်း ဖြစ်သည်။ ၁၇၈၀-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနိုသည် အဆိုပါ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောင်မြို့နယ် နဘက်ရွာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ တဖန် ၁၇၈၆-ခုနှစ်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနိုသည် ရန်ကုန်သို့ တာဝန် ရွှေ့ပြောင်း ထမ်းယူသောအခါ အဆိုပါ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို မိမိနှင့် တပါတည်း ရန်ကုန်သို့ ပြောင်းရွှေ့ သွားခဲ့ပြန်သည်။ ထိုတတိယအကြိမ်မြောက် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သော ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းကို ရန်ကုန် စိန်ဂျွန်းဘတ္တစ္စတား စာသင်ကျောင်းတွင် တွဲဘက်ထား၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ တက်ရောက်နေကြသော ကျောင်းသားကလေးများသည် ကျောင်းတော်၏ စာပေ သင်ရိုးညွှန်းကို လိုက်နာသင်ကြားရသည့် အပြင် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ကျမ်းစာများ ဒဿနိဗေဒ၊ တို့ကိုလည်း သင်ယူကြရသည်။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ ကက်သလိခ် ရဟန်းဘောင်သို့ တက်လှမ်းခဲ့ကြ
မြန်မာပြည်ရှိ ကက်သလိခ်သာသနာ တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးနှင့် သာသနာ အဓွန့်ရှည် တည်တန့်ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ သာသနာ့ဘောင်တွင် ရှိနေခြင်းသည် အထူးအရေးကြီးကြောင်း ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုတို့ ကောင်းစွာ သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ဤစီမံကိန်း အောင်မြင်မှု အတွက် ဆရာတော်ပယ်ရ်ကိုတက် လက်ထက်မှ စတင် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဆရာတော် မန်တေဂါးဇားလက်ထက်တွင် မိမိတို့ မျှော်မှန်းထားသော ပန်းတိုင်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤ ပန်းတိုင်သို့ မဖြစ်မနေ ဇွဲလုံးလဖြင့် ခရီးနှင်ခဲ့သူမှာ ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနိုဖြစ်သည်။ ၁၇၈၆ ခုနှစ်မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော စိန်ဂျွန်း ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသည် (၇)နှစ်တာ အတွင်း အောက်ဖေါ်ပြပါ မြန်မာ တိုင်းရင်းသားကလေးများကို သာသနာ့ဘောင်သို့ ပို့ဆောင် ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
၁။ ဦးပဉ္စင်းကြီး၊ ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီး
၂။ ဦးပဉ္စင်းကြီး အန္ဒြူး မောင်ကိုး၊
` ၃။ ဦးပဉ္စင်းကြီး အစ်ဂနေးဆီအုးစ် ဒေဘရစ်တို။
၄။ ဦးပဉ္စင်းကြီး ဒီပေါလို၊
၅။ ဦးပဉ္စင်းလေး (၂)ပါး
` ၆။ သိက္ခာတော်ရ ကိုရင်ကြီး (၂)ပါး။
၇။ သင်္ကန်းရ ကိုရင် ၁၂ ပါးတို့ ဖြစ်ကြသည်။
သက္ကရာဇ် ၁၇၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလသည် မြန်မာပြည် ကက်သလိခ်သာသနာတော်အတွက် သမိုင်းစဉ်ဆက် မမေ့အပ်သော မင်္ဂလာနှစ်မြတ်ဖြစ်သည်။ သာသနာဟူသည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဟူသော ရတနာသုံးပါး ပြည့်စုံမှသာလျှင် သာသနာတော်၏ အင်္ဂါရပ်များဖြင့် ပြည့်စုံသည် ဟုဆိုရပေမည်။ ဘားရ်နားဘိုက် သာသနာပြုတို့သည် သာသနာတော်ကို တည်ထောင်ရာ၌ ဦးစွာ ပထမ ဘုရားအကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့ကြသည်။ တရားတော်ကိုလည်း သွန်သင် နှလုံးသွင်းပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုရတနာများ ပြည်စုံပြီး ယခုမှု တတိယ ရတနာများဖြစ်သော သံဃယတော်များကို မွေးထုတ် ပေးခဲ့ကြသော အချိန်သို့ စိုက်ရောက်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၇၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှာပင် အထက်မြန်မာပြည် အမရပူရမြို့တော်၌ ဆရာတော် မန်တေဂါးဇားသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား ရင်သွေးကလေးများဖြစ်သော ဦးပဉ္စင်းကြီး ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီး၊ ဦးပဉ္စင်းကြီး အန္ဒြူးမောင်ကိုးနှင့် ဦးပဉ္စင်းကြီး အစ်ဂနှေးဆီအူးစ် ဒေဘရစ်တိုတို့အား ရဟန်းဘောင်သို့ တင်မြှောက်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်ရောက် ဘားရ်နဘိုက် သာသနာပြု အဖွဲ့အားလုံး၏ ၀င့်ကြွားဖွယ်ရာ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ နေ့မြတ်ဖြစ်သည်။ အလားတူ မြန်မာရင်သွေး ကလေးများကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့် မိဘများကိုလည်း အထူးပင် ဂုဏ်ပြုအပ်သော နေ့မြတ်ဖြစ်သည်။
ရဟန်း သိက္ခာတော်ကို မြန်မာ့မြေပေါ်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ခံယူခဲ့ကြသော ရဟန်း(၃)ပါးတို့ အကြောင်းကို အောက်တွင် အကျဉ်းမျှ ဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
(၁) ဘုန်းတော်ကြီး ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီး
ဂျိုးဇက်မောင်မောင်ကြီးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း ရေဦးမြို့နယ် ၊ချမ်းသာရွာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ ၁၇၇၂ ခုနှစ်တွင် ဆရာတော် မန်တေဂါးဇားသည် ချမ်းသာရွာတွင် စတင် အမှုထမ်းရွက်ခဲ့ပြီး၊ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရေး အတွက် စာသင်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထိုကျောင်းတွင် ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီးသည် ပညာသင်ရင်း ကြီးပြင်းလာခြင်း ဖြစ်သည် ။ ရဟန်းတပါး ဖြစ်လိုသဖြင့် မုံလှရွာတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ရဟန်းဖြစ်ကျောင်းသို့၎င်း၊ ထိုနောက် နဘက်ရွာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားသော ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းနှင့် ရန်ကုန်သို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် ရောက်ရှိသွားပြီး၊ ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနို လက်အောက်မှာပင် ပညာရပ်များကို ဆက်လက် ဆည်းပူးပြီး ဆုံးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၇၉၃ ခုနှစ်တွင် ချမ်းသာရွာသည် မြန်မာ တိုင်းရင်းသားထဲမှ ပထမဆုံး ရဟန်းတော်ကို မွေးထုတ်ပေးခဲ့သည့်နည်းတူ၊ နှစ်ပေါင်း (၁၆၀)ကျော် ရောက်ချိန်၊ သက္ကရာဇ် ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်၊ မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှ ပထမဆုံးသော ဆရာတော်ကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤ ပုဂိုလ် (၂)ပါးစလုံးသည် ဂျိုးဇက်ဘွဲ့ အမည်ကို ခံယူထားကြသည်။ ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီးသည် ရဟန်းဝါတော် (၁၇)နှစ်၊ သက္ကရာဇ် ၁၈၁၀ ခုနှစ် မုံလှရွာံတွင် သာသနာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေခိုက် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။ ရဟန်းတို့၏ ဂုဏ်သိက္ခာတော်နှင့် ပြည့်စုံပြီး ဘာသာတူများ၏ ကြည်ညို လေးစားမှုကို ခံစားရရှိသည်။ ၁၈၄၂ ခုနှစ် ပိုင်းများတွင် ရောက်ရှိလာကြသော အိုဘလိတ် (Oblates) သာသနာပြုများအား ရှေးမီ ကက်သလိခ် ဘာသာတူများမှ ဘုန်းတော်ကြီး ဂျိုးဇက် မောင်မောင်ကြီးအကြောင်းကို ချီးမွမ်း မဆုံး ဖြစ်နေကြသေးသည်။
(၂) ဘုန်းတော်ကြီး အန္ဒြူး မောင်ကိုး
ဘုန်းတော်ကြီး အန္ဒြူး မောင်ကိုးသည် စစ်ကိုင်းတိုင်း တန်ဆည်မြို့နယ်၊ ချောင်းရိုးရွာတွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ နဘက်ရွာ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းမှ တဆင့် ရန်ကုန်ကျောင်းသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ၁၇၉၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ဆရာတော်မန်တေဂါးဇားလက်မှ အမရပူရမြို့တော်တွင် ရဟန်းသိက္ခာ ခံယူခဲ့သည် ဘုန်းတော်ကြီး အန္ဒြူးမောင်ကိုး၏ ထူးခြားချက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားထဲမှ ပထမဆုံး သူတော်စင်ဂိုဏ်းဝင် (Religious) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး အစ်ဂနေစီဦးစ်နှင့် အတူ ၁၈၀၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့တွင် ဘားရ်နားဘိုက် အသင်းသားတို့၏ ကတိသစ္စာများကို ပြုကြလျက် အသင်းဂိုဏ်းကို ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၈၀၆ ခုနှစ် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်ရ်မားနို အီတလီပြည်သို့ ပြန်လည် ကြွမြန်းသွားသောအခါ ဘုန်းတော်ကြီး မောင်ကိုးသည် ရန်ကုန်သာသနာရှိ စိန်ဂျွန်းကျောင်းကို တာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ ပညာရေးဘက်တွင် နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာ သယ်ပိုးထမ်းရွက်ပြီး အင်းဝသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သို့သော် ၇န်ကုန်တွင် ဘုန်းတော်ကြီး ဒီဘရစ်တို တပါးတည်း ကျန်ရှိသဖြင့် အင်းဝမှ ပြန်လည်ထွက်ခွါ၍ ရန်ကုန် စိန်ဂျွန်းကျောင်းတွင် ပြန်လည် တာဝန်ယူ ထမ်းရွက်ခဲ့ရသည်။ ၁၈၂၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော ပထမ-အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်တွင်းကာလတွင် ဒုက္ခများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ မိမိကျောင်းတော်ကြီးအား ဗြတိသျှတို့ လက်ချက်ဖြင့် မီးလောင်ကျွမ်းသည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ခံစား လိုက်ရသည်။ စစ်အတွင်းအချိန်က ခံစားရရှိခဲ့သော ဒဏ်များဖြင့်ပင် ၁၈၂၄ ခုနှစ်၌ ရန်ကုန်တွင် ပျံလွန်တော်မူခဲ့သည်။
(၃) ဘုန်းတော်ကြီး အစ်ဂနေးစီးဦးစ် ဒေဘရစ်တို
ဘုန်းတော်ကြီး အစ်ဂနေးစီးဦးစ် ဒေဘရစ်တိုသည် ပေါ်တူကီအမျိုးသား ဖခင်ဖြစ်သူနှင့်၊ အိန္ဒိယ အမျိုးသမီး မိခင်ဖြစ်သူ ၊မိဘနှစ်ပါးမှ ရန်ကုန်တွင် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ မိဘနှစ်ပါး ကက်သလိခ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သော်လည်း ဒီဘရစ်တိုသည် ငယ်စဉ်အချိန်ကပင် ကက်သလိခ်ဘာသာထဲသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့သည်။ ဘာသာထဲသို့ ၀င်ရောက်လာသော အစ်ဂနေးဆီးအူးစ် ဒေဘရစ်တိုသည် ဘားရ်နားဘိုက် ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ စိတ်တိုင်းကျ သူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒေဘရစ်တိုသည် အလွန် ထူးခြားသူဖြစ်သည့် အပြင် နာခံမှု ကြီးမားသူ၊ မိမိကိုယ်ကို မိမိယုံကြည် စိတ်ချသူတစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ နဘက်ရှိ ရဟန်းဖြစ်သင်ကျောင်းသို့ ဦးစွာ ပထမ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဘုန်းတော်ကြီး စန်ဂျယ်မားနိုနှင့် အတူ ရန်ကုန် စိန်ဂျွန်းကျောင်းသို့ ပညာများကို ဆက်လက် သင်ကြားခဲ့သည်။ အီတလီမှ ရောက်ရှိလာသော သာသနာပြုများနှင့် လွယ်ကူစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ဘို့ အီတလီဘာသာစကား၊ စာများကို သင်ကြားခဲ့ရာ ဘုန်းတော်ကြီးများ၊ အထူး ချီးမွမ်းခံရလောက်အောင် အီတလီဘာသာစကားကို တတ်မြောက်သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အင်္ဂလိပ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ စပိန်၊ ဟင်ဒူစတန်နီ၊ ပါဠိ၊ အစရှိသော ဘာသာစာပေများကိုလည်း တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်သည်။ စာမျက်နှာ ၅၀၀ ပါရှိသော အီတလီ-မြန်မာသဒ္ဒါကျမ်းကိုလည်း ရေးသားပြုစု ခဲ့သည်။ အလားတူ အီတလီ-မြန်မာ-ပါဠိ (၃) ဘာသာတွဲ အဘိဓာန်ကျမ်းကိုလည်း ပြုစုခဲ့သည်။
အစ်ဂနေးဆီအူးစ် ဒေဘရစ်တိုသည် စာပေအပြင်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်၌ ကျွမ်းကျင်သူ ဖြစ်သည်။ အီတလီ-မြန်မာ လက်တင် (၃) ဘာသာဖြင့် ဆေးကျမ်းများကိုလည်း ရေးသားပြုစုခဲ့သည်။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးများကို လက်တင်ဘာသာ အခေါ်အဝေါ်များနှင့် တွဲပေးသည်။ တနည်းဆိုသော် အရှေ့တိုင်း ဆေးပညာနှင့် အနောက်တိုင်း ဆေးပညာရပ်များကို ဆုံဆည်း ဖလှယ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
အနုပညာပိုင်းတွင်လည်း တေးဂီတ အနုပညာသည်တစ်ဦး ဖြစ်သည့် အလျောက် အထူးသဖြင့် ဓမ္မတေးများကို စပ်ဆို ရေးသားခဲ့သည်။ မော်လမြိုင်မြို့ရှိ ကက်သလိခ်အသင်းတော်အတွက် ပေါ်တူဂီ ဘာသာစကားဖြင့် ခရစ္စမတ်ဓမ္မတေးများကို စပ်ဆို ရေးသားပေးခဲ့သည်။ ပါစကားအချိန်၌ ဆိုအပ်သော ဓမ္မတေးများကိုလည်း လက်တင်ဘာသာဖြင့် ရေးသား စပ်ဆိုခဲ့သည်။
အင်းဝရောက်ခြေရာများ - အပိုင်း (၂၄)
Posted by Archdiocese Of Mandalay Blog at 9:24 PM